2017 Wuxuu ahaa Sanadkii ugu khasaaraha badnaa Marayknaka. (Akhris+Dhagayso) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
2017 Wuxuu ahaa Sanadkii ugu khasaaraha badnaa Marayknaka. (Akhris+Dhagayso)
On Dec 23, 2017 843 0
Wargeyska The Atlantic ee kasoo baxa dalka Maraykanka ayaa qoray warbixin cusub oo uu kaga sheekeynayo dhaqaalaha Maraykanka uu ku waayay musiibooyinkii Rabaaniga ee sanadkan dhamaadka ah ku dhuftay dalka Maraykanka.
Wargeyska oo soo xiganaya Aqoonyahanno ku takhasusey arimaha dhaqaalaha ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Maraykanka ay kamid tahay dowladaha waxyeellada ugu badan uu sanadkan 2017 kasoo gaaray waxa loogu yeero isbedelka cimilada ee saameeyey caalamka.
Wuxuu wargeysku intaas ku darayaa in dowladda Maraykanka ay musiibooyinkaas ku bixisay hanti dhowr ku jibaaran kuwii kaga baxay musiibooyinkii sanado hore iyo waayadii hore ku dhuftay Maraykanka.
Qaar kamid ah musiibooyinka ku dhuftay Maraykanka sanadkan miilaadiga ah ee dhamaadka ah ayuu wargeysku soo bandhigay waxaana musiibooyinkaas kamid ah daadadkii ku dhuftay gobollada Texas iyo Florida, dabeylihii burburiyay gobollada Verginia iyo Puerto Reco, iyo dabkii gobollada Montana iyo Oregon u bedelay bacaad lama degaan ah.
Musiibooyinkan waxay keeneen in magaalooyin badan ay gebi ahaanba baaba’aan una ekaadaan meel bahal galeyn ah, waxaana hantidadan baaba’day ka daran dib u dhiska magaalooyinkaas oo Maraykanka uga baxay aduun lacageed oo farabadan.
Wargeyska Atlantic wuxuu sheegayaa in marka laga soo tago khasaaraha maaliyadeed ee musiibooyinkaas ay geysteen uu jiro khasaare nafeed, sida ka dhacdayba magaalada SanFaransicko iyo kuwa kale.
Hay’ad maxalli ah oo fadhigeedu yahay Maraykanka ayaa si faafaahsan uga sheekeysay khasaaraha kala duwan ee musiibooyinkan rabaaniga ah ee uu Alle ku salladay Maraykanka gaar ahaan dabeylaha oo keliya uu ku reebay dowladda Marayknaka, waxayna sheegtay in marka laga hadlo hantida caadiga ee kaashka ah ee ku khasaaray dabeylaha ay gaareyso 40 Bilyan oo dollar, hantida maguurtada ah ee burburteyna waxay ku fadhisaa aduun lacageed oo gaareysa 55 bilyan oo dollar.
Waxaa xusid mudan in musiibooyinka kale sida duufaannada iyo dabka kacay ay iyaguna sababeen khasaare intaas la eg ama kabadan, sida wargeysku sheegayo.
Duufaannadii loogu magacdaray Iirma iyo Hervy ayuu sheegayaa wargeysku ineysan geysan khasaarihii la filayay, balse waxay dowladda ku qasbantahay iney dhisto dhamaan guryihii ku burburay duufannadaas, waxaana hadda Maraykanka qaali ka ah kirada guryaha sida uu sheegayo wargeysku.
Gobollada Florida iyo Texas oo keliya wuxuu gaarayaa khasaaraha ka dhashey musiibooyinka aduun lacageed oo dhan 131 bilyan oo dollar.
Dabka ka kacay gobollka Clofornia ayaa sababay khasaaraha hanti gaareysa 9.4 bilyan, waxaana si xun ugu dhintay 41 ruux, wuxuuna dabkaas ahaa kii ugu xumaa uguna burbur badnaa inta la xusuusto taariikhda gobolka Clifornia.
Arinta ugu adag ee hadda hortaagan Maraykanka, dhaqaale badana ku baxaya waxay tahay sidii loo dhisi lahaa wixii burburay, oo ay ku jiraan buundooyin waaweyn oo aysan sahlaneyn in si deg deg ah loo dhiso.
Waxaa sidoo kale dowladda Maraykanka maareyn ka raba qoysaska ku hanti beelay musiibooyinkan, kuwaas oo ciida kabadan, waxayna arimahan oo idil imaanayaan iyadoo dhaqaale la’aan baahsan ay ka jirto wadamada Yurub iyo Maraykanka, waxaana shacabka Maraykanka u dheer in taladooda uu hayo hogaamiye waalan oo khamriga istaag ka caba.
Halkan ka dhagayso Warbixn_Khasaaraha_Marayknka_iyo_Musiibooyinka sanadka 2017